We She Me: ဌာပနာရသော စားစရာများ
စမူဆာ၊ ပေါက်စီ၊ ဖက်ထုပ်၊ အာလူး ကတ်တလိပ်ကဲ့သို့ ဌာပနာရသော စားစရာများထဲမှ လောလောဆယ် တရုတ်စာ ၂ မျိုး၊ ကုလားစာ ၂ မျိုးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှ တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးကို ကြိုက်တဲ့သူ ရှိနိုင်မှာ။ ဒီလို အစားအစာတွေကတော့ သူမက စိတ်ရှည်ရှည် လုပ်ပေးလို့ စားဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါမျိုးတွေမှာတော့ စိတ်မရှည်ချင်ပါဘူး။
မကေက စမူဆာလုပ်စားပြီး Recipe ပေးလို့ နည်းနည်း Customise လုပ်ပြီး ကြော်စားကြတယ်။ မကေရဲ့ Recipe က ``ကိုအန်ဒီနဲ့သူမ အတွက်.. ရှယ် Recipe လေး.. ဘလော့ နောက်ကနေ.. တိတ်၂ လေး ပေးလိုက်တယ်.. ( ဘယ်သူ့မှတော့ မပြောနဲ့-ဒါ.. အိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်း က..Great Great grand Mother Recipe နော်-း) အားလူးကို ပြုတ်..ချေ ထား။ ကြက်သွန်နီ ဆီသပ် ဆနွင်း ထဲ့.. ကြက်သားထဲ့.. ပြီးမှ.. Cummin အမှုန့်လေး.. တဇွန်းလေး ထဲ့.. ငံပြာရည် နဲနဲ ထဲ့.. အိုကေ.. မွှေး.ပြီး.. ကျက်ရင်- အားလူကြေထဲ ရော မွှေ..။ ဒါပဲ- ကော်ပြန့်ရွက်မှာ ခေါက်တာလေးပဲ။ ကျမကတော့.. ပုံမှန် လေးထောင့် အရွက်ကြီးကို.. ၃ပိုင်း အရှည် ရအောင် ကပ်ကြေးနဲ့ကိုက် လိုက်တယ်။´´ကျေးဇူး မကေ။
ကျွန်တော်တို့ အရင်လုပ်စားတုန်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေက ကြော်သလို အာလူးကို အတုံးလေးတွေ လှီးထားပြီး ကြော်တာ။ နောက်တော့ မကေ ပြောသလို အာလူးကို ပြုတ်ထားပြီးမှ ရောကြော်တာ။ ဘာကွာသလဲဆိုတော့ အတုံးလေးတွေက ဖက်နဲ့ထုပ်တဲ့ အခါကျတော့ နေရာ အနှံ့ မရောက်ဘူး ဖြစ်တယ်။ ကြော်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့လည်း အတုံးလေးတွေက နည်းနည်း ခြောက်တယ်။ အာလူးကို ပြုတ်ပြီး ချေထားတာက အပြည့်အသိပ် နေရာလွတ် မကျန်အောင် ထည့်လို့ရပြီး စမူဆာကို စားရတဲ့ အခါ ပိုကောင်းတယ်။ စီးပွားရေး အရဆိုရင်တော့ အစာ ပိုကုန်ပေမယ့် အိမ်မှာ လုပ်စားတာ ဆိုတော့ ပြုတ်ထားတာက ပိုကောင်းတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့က အာလူးကို ပြုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခွံမခွာဘဲ Microwave ထဲထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ကြာရင် တစ်ဘက်လှည့်ပြီး နောက် ၅ မိနစ် ထပ်ဖုတ်တာပါ။ ပြုတ်သလိုပါပဲ။ အနည်းငယ် ခြောက်တာ တစ်ခုပါပဲ။
အရင်တုန်းက စမူဆာ လုပ်စားရင် အသား မထည့်ဖြစ်ဘူး။ လူက အပေါစားတွေ စားပြီး အပေါစားတွေနဲ့ အရိုး စွဲနေပြီ။ အခုတော့ ကြက်ရင်ပုံသားကို အတုန်းသေးသေးလေးတွေ လှီး ဆား၊ နနွင်းနဲ့ အရင် ကြော်လိုက်တယ်။ ကြက်သားတွေ ကျက်သွားမှ ကြက်သွန်နီ လေးထောင့်တုန်းလေးတွေ လှီးထားတာ ထည့်ကြော်လိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီတွေ ပျော်မသွားအောင် ကြက်သားကျက်မှ ထည့်တာပါ။ ခဏလေး နေတာနဲ့ အာလူးပြုတ်ပြီး ချေထားတာတွေ ထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်က ဟင်းသီးဟင်းရွက်လည်း ကြိုက်တော့ သူမကို ပဲသီးစိမ်းလုံး ထည့်ဖို့ ကြိုပြောထားတယ်။ ပဲသီးစိမ်းပါတော့ စားရတာ ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ် မဖြစ်တော့ဘူး။ ဇီရာမှုန့် (Cumin) အနည်းငယ်ထည့်၊ ပူတီနံကို လှီးထားပြီး ထည့်၊ မဆလာများများ၊ ဆားနည်းနည်းထည့်ပြီး နည်းနည်း ကြော်လိုက်တယ်။ ဒါတွေ မပါရင် စမူဆာက မွှေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီသပ်ကတည်းက ငရုတ်သီးမှုန့် နည်းနည်းလေး ပါတယ် ဆိုရုံ ထည့်လည်း ရပါတယ်။ အားလုံး ကျက်တော့ အအေးခံထားတယ်။
ဖက်အတွက် ကော်ပြန့်ရွက် အကြီးကို အရှည်လိုက် ၃ ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်။ လေးထောင့် ရှည်ရှည် ဖတ်ကို တစ်ဖက်ပိတ် ကန်တော့ပုံရအောင် ခေါက်လိုက်တယ်။ အစာတွေကို နေရာအနှံ ၀င်အောင် သွပ်ပြီး ပိုနေတဲ့ အနားတစ်ဖက်ကို ပြန်ခေါက်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ခေါက်နည်းကို မလုလုဆီကနေ ရတာပါ။ ဒီမှာ ပုံနဲ့ တကွ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆီများများထဲမှာ ကြော်လိုက်ပြီး ဆယ်တဲ့အခါ မီးဖိုချောင်သုံး တစ်ရှူးအထူ ခင်းထားတဲ့ ဗန်းထဲထည့်ပြီး ဆီစုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာလိုတော့ သတင်းစာ မသုံးသင့်ပါဘူး။ သတင်းစာက ခဲတွေက အစားအသောက်ထဲ ပါသွားမှာ စိုးလို့ပါ။ အချဉ်အတွက်တော့ မန်ကျည်းရည်နဲ့ Garlic Chili ငရုတ်ဆီကို ရောမွှေပြီး အလွယ် ဖျော်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ စမူဆာက ကြည့်ရင်သာ ဘာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီလို ကြော်ဖို့ နွှာ၊ လှီး၊ ပြုတ်၊ ကြော်၊ ထုပ်၊ ပြန်ကြော်ဖို့ အချိန်တော့ ၁ နာရီ ကျော်ကျော် ကြာနိုင်ပါတယ်။ စားတဲ့ အခါမှာတော့ ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်အတွင်းမှာ ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။
အာလူး ကက်တလပ်အတွက်တော့ အာလူးကို ပြုတ်မှ ဖြစ်မှာပါ။ အထက်က ပြောထားသလို Microwave ထဲ ထည့်လို့ မရပါဘူး။ ပြုတ်မှ စီးမှမို့ အာလူးကို ပြုတ်ပါတယ်။ အခွံခွာပြီး ထောင်းရပါတယ်။ ထောင်းတဲ့ အခါ ပြောင်းကော်မှုန့် (ဒါမှမဟုတ်) ကောက်ညှင်းမှုန့် နည်းနည်း၊ ဆားသင့်ရုံ ထည့်ပြီး စီးသွားတဲ့ အထိ ထောင်းပါတယ်။ ဆီးသွားတဲ့ အထိတော့ မထောင်းပါနဲ့ ဟင်းတွေ ပိုငန်ကုန်ပါမယ်။ ပြောင်းကော်မှုန့်ပါမှ အာလူးအသားက စီးစီးတွဲတွဲလေးနဲ့ စားလို့ ကောင်းတာပါ။
အစာအတွက် အမဲသားဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်သားဖြစ်ဖြစ် အကြေ ဒါမှမဟုတ် အတုံး သေးသေးလေးတွေကို ကြက်သွန်နီ လေးတောင့်တုံးရယ်၊ မုန်လာဥနီ ခြစ်ထားတာရယ် ရောကြော်ပါတယ်။ ဆားသင့်ရုံ၊ မဆလာနည်းနည်း ထည့်ပါတယ်။
အာလူးထောင်းထဲက ပင်ပေါင်ဘောလုံးလောက် ၂ လုံး ယူလိုက်ပါတယ်။ တစ်လုံးကို ပြားပြီး ခွက်ကလေး လုပ်ပြီး အစာတွေကို လက်ဘက်ရည် တစ်ဇွန်းစာ မောက်မောက် ထည့်လိုက်ပါတယ်။ အာလူး နောက်တစ်လုံးကို ပြားလိုက်ပြီး အုပ်ပြီး ကြည့်ကောင်းအောင် ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ကိုလည်း အနားမှာ အသင့် ရှိပါစေ။ အာလူးကို ကိုင်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ လုံအောင် ပိတ်ပြီး ဆီ တ၀က်စာ ဖုံးလောက်ထည့်ပြီး မီးနွေးနွေးနဲ့ ကြော်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကို ကြွပ်အောင် စောင့်ပြီးမှ နောက်တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပါ။ နို့မဟုတ်ရင် ကြေသွားနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံး ကြွပ်ရင်တော့ ဆယ်ပြီး တစ်ရှူးပေပါနဲ့ ဆီစုပ်ထားပါတယ်။
ဖက်ထုပ်ကိုတော့ ပြုတ်ကြော် လုပ်စားပါတယ်။ ဆီနဲ့ ကြွပ်ကြွပ် ကြော်တာထက်စာရင် ပြုတ်ကြော်က အနည်းငယ်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းနိုင်တယ် ဆိုတာထက် ပြုတ်ကြော်ကို ပိုကြိုက်လိုပါ။
အစာအတွက် ၀က်သားအကြေ ၂၅၀ ဂရမ်ကို ကျူးဆိုင် ၁ စည်း (ခပ်များများ - ဆတူနီးပါး)၊ ဆားသင့်ရုံ၊ ငရုတ်ကောင်း အမည်း များများ၊ ပဲငန်ပြာရည် အကျဲ အနည်းငယ်၊ နှမ်းဆီအနည်းငယ်၊ သကြား အနည်းငယ်နဲ့ သမအောင် မွှေလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဖက်ထုပ်ဖက်ထဲကို အစာ များများထည့်ပြီး ထိပ်တွေကို ရေဆွတ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ လိုက်ဖိပါတယ်။ ဖက်ထုပ်တွေက ဗိုက်ဖောင်းဖောင်းလေးတွေ ဖြစ်နေရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဆီနည်းနည်း ထည့်ထားတဲ့ ဒယ်အိုးထဲမှာ စီထည့်ပြီး ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ၂ရေ ၃ရေလောက် ထပ်ထည့်ပေးရပါတယ်။ ကျက်ခါနီးမှ အောက်ခြေတွေကို အရောင်သန်းလာတဲ့ အထိစောင့်ပြီး ကြော်ပါတယ်။ လှန်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ အောက်ခြေတွေ လိုသလောက်လည်း ရပြီဆိုရင်တော့ သတိထား ဆယ်လို့ ရပါပြီ။
အချဉ်အတွက်တော့ ဂျင်းအမျှင်လေးတွေရယ်၊ ပဲငန်ပြာရည် အကြည်ရယ်၊ သံပုရာသီးရယ်နဲ့ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ရယ်ဒီမိတ်လည်း ရှိပါတယ်။
ပေါက်စီအတွက်ကတော့ အရေးကြီးတာ ဂျုံမှုန့်ပါ။ ပထမ ကိုယ့်ဘာကိုယ် တစ်ခေါက်လုပ်စားတာ ဂျုံမှုန့်တွေက ကောင်းကောင်းမပွလို့ ပေါက်စီ အသားက နည်းနည်း ကျစ်သွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေ လုပ်စားတော့ ရယ်ဒီမိတ် ဂျုံမှုန့်နဲ့ လုပ်စားတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာကိုယ် လုပ်စားချင်ရင်တော့ ဦးကြီးပုရဲ့ နည်းကို ရှဲလိုက်ပါတယ်။ သူပြောတဲ့ အတိုင်း အတိအကျလုပ်ပြီး ကြာကြာ ဖောက်ထားမှ ကောင်းမယ်ပုံပါ။ ကျွန်တော်တို့က အချိန်မပေးလိုက်တော့ ကျစ်သွားပါတယ်။
`ဂျုံမှုန့် (၅၀ သား) ကို ဘေကင်ဆော်ဒါ (လက်ဘက်ရည် ဇွန်း ၂ ဇွန်း) နဲ့ ရောစပ်၍ သမသွားအောင် စကာနဲ့ အထပ်ထပ် ချပါ။ ခေါက်ပြီး ဘဲဥ၊ ကြက်ဥ (၆လုံး) တို့နှင့် ဂျုံအလျဉ်တို့ကို ရောနယ်ပါ။ နွားနို့ ထည့်နယ်ပါ။ နယ်သားကျသွားသောအခါ ပိတ်ပါးကို ရေဆွတ်၍ ခေတ္တ အုပ်ထားပါ။´ တဲ့။ ကျွန်တော်တို့က ဘေကင်ဆော်ဒါ ထည့်တာ နည်းပြီး အုပ်တာ နာရီဝက်လောက်ပဲ ဆိုတော့ မုန့်က မပွဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဘေကင်ဆော်ဒါများများ ထည့်ပြီး ၂ နာရီလောက် နှပ်ထားရင်တော့ ကောင်းမှာပါ။ နောက်တော့ ဆိုင်က ၀ယ်လာတဲ့ ရယ်ဒီမိတ် ဂျုံမှုန့်နဲ့ဆိုတော့ ကောင်းကောင်း ပွပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်ကို ရေအေးနဲ့ နယ်ပြီး ၁ နာရီလောက် ထားပါတယ်။
အစာအတွက် ၀က်သားအကြေ ၂၅၀ ဂရမ်ကို ကြက်သွန်ဥနီကို လေးထောင့်တုံး လှီးထားတာရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ သေးသေးနုပ်နုပ်လှီးထားတာရယ်၊ ဆားသင့်ရုံ ငရုတ်ကောင်းများများ၊ သကြား လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ပဲငန်ပြာရည် အကြည်နည်းနည်း၊ ထည့်ပြီး နယ်ပါတယ်။ ဘဲဥ အငန် မရှိတော့ ကြက်ဥပြုတ် ထည့်ပါတယ်။ ၀က်အူချောင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး ထည့်ပါတယ်။
ဌာပနာဖို့ ဂျုံသား ခပ်ကြီးကြီး ယူပြီး ခွက်လုပ်ထည့်ပြီး ဘေးသားတွေကို အပေါ်ကို စုယူပြီ လိမ်လိုက်ပါတယ်။
ပေါင်းချောင်ထဲကို ခပ်ချောင်ချောင် ထည့်ပါတယ်။ မုန့်သားက ပွလာမှဆိုတော့ နေရာ ပေးထားရပါတယ်။ ပေါင်းတဲ့ အခါ ရေနွေးကို ဆူအောင် လုပ်ပြီးမှ ပေါင်းချောင်ကို ဆင့်ပါတယ်။ ရေနွေးထဲကို Vinegar တစ်ဇွန်းလောက် ထည့်ပေါင်းရင် ဂျုံသားဖြူပါတယ်။ နာရီဝက်လောက် ပေါင်းရပါတယ်။ ပေါင်းနေချိန်မှာ ဖွင့်မကြည့်ရပါဘူး။ အချိန်တန်ရင်တော့ ပေါက်ဆီပွပွတွေ ရပါပြီ။ ငရုတ်ဆီနဲ့ ဆိုရင် လိုက်ဖက်ပါတယ်။ လာရှိုး ၇လွှာ ပေါက်ဆီလောက်တော့ အသားမပွပေမယ့် သူ့လို ငရုတ်သီးကြော်နဲ့ စားလည်း ကောင်းပါတယ်။
LIN LET KYAL SIN - 11/5/08, 12:35 PM
စမူဆာနဲ့ အာလူးကတ်တလိပ်ကို စားချင်တယ်။ တစ်ခါမှ ကိုယ်တိုင် မလုပ်စားဖူးဘူး။ ဒီနည်းလမ်းကို ကြည့်ပြီး တစ်ခါလောက် ကိုယ်တိုင်လုပ်စားကြည့်ပါဦးမယ် :)
PTi - 11/5/08, 12:39 PM
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေပါပဲလား... ကိုအန်ဒီ ပေးတဲ့ နည်းအတိုင်း လုပ်စားကြည့်ဦးမှပဲ...
nu-san - 11/5/08, 3:14 PM
Andy ရေ.. အဲဒီမှာ မုန့်ဆိုင်ဖွင့်လို့ ရပြီနော်.. လူလိုရင် အမကိုခေါ်.. အမလာဝိုင်းပြီး ကူလုပ်ပေးမယ်.. စမူဆာတော့ လုပ်စားဖူးတယ်.. ကျန်တာတွေတော့ မလုပ်စားဖူးဘူး.. ပေါက်ဆီတောင် ကိုယ်တိုင်လုပ်စားတယ်ဆိုတော့ လေးစားတယ်... အိမ်ချင်းနီးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ.. :D
strike - 11/5/08, 7:01 PM
ရှလွတ် ရှလွတ် ဂလု ဂလု ...၀ုန်း..
မြစ်ချေသူ - 11/5/08, 8:56 PM
စာကိုဆက်မဖတ်နိုင်ပဲ ပုံတွေကိုပဲကျော်ကျော်ကြည့်ချင်နေလို့ပုံတွေကိုဝအောင်အရင်ကြည့်ပြစ်လိုက်တယ်။ ဟိုတစ်ခါ ငါးနဲ့ သရက်သီးရောဟင်းကိုတော့ နှစ်ခါရှိပြီ လုပ်စားကြည့်တာ။ ခုတော့ အာလူးကတ်တလိပ်က ပိုလွယ်မယ်ထင်လို့ အဲဒါကိုပဲအရင်လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်..။
မကြာခဏ လာရောက် အားပေးနေပါတယ်။
The' - 11/5/08, 8:57 PM
စမူဆာ ပဲ သုတ် လုပ်စားချင်တယ်။ စမူဆာလုပ်တတ်ပေမဲ့ ဘာပဲ ထည့်ရမယ်..ဘာအစာပလာတွေ ပါတယ်သေချာမသိဘူး။ (တခါမှ မစားဘူးလို့ :D ) … သိရင် အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ပြောပြပေးပါလားရှင်။ ကျေးဇူးပါနော်။
Kay - 11/5/08, 9:04 PM
အား- သူမ က..တကယ်လုပ်နိုင်တာပဲ။ ပေါက်စီတောင်ကိုယ်တိုင်ချတယ်။ ကိုအန်ဒီတော့..ဇိမ်ပဲ။
အာလူးကတ်တလိတ်တော့..နည်းယူသွားပီ။ အရင်က..လုပ်လုပ်ကြည့်တာ..အားလူးတွေက..ဖွယ်တယ်တယ်ဖြစ်နေတာရယ်..အစာသွပ်ရတာ..အဆင်မပြေတာရယ်..ဆီသိပ်စုတ်လွန်းလို့..အီတာရယ်.. မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
Anonymous - 11/7/08, 12:30 AM
အဟိ မကေပြောသလို ပေါက်စီတော့ ၀ယ်ပဲစားတော့မယ် ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာနေတာပဲဆိုတော့း)
Anonymous - 11/7/08, 6:12 PM
စာဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ စားသွားပါတယ်။
အဲ တကယ် စားချင်သွားပြီတော့ ဘီလို လုပ်ရပါ့ :-?
strike - 11/8/08, 5:19 AM
အင်း ဒုက္ခ ဒုက္ခ ၊ကောင်းတာကတော့ ကိုအန်တီမြင့်ကိုဖမ်း၊အိမ်ကမီးဖိုထဲမှာသံခြေခြင်းခတ်ပြီးတမျိုးပြီး ၊တမျိုးချက်ခိုင်းထားလို့ကတော့ ဇိမ်ပဲဗျာ။
khin oo may - 11/8/08, 1:16 PM
8 Nov 08, 12:15
ုkom: မနေနိူင်တာနဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဂလုဖြစ်သွားလို့ ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။
8 Nov 08, 12:14
ုkom: ကိုယ့် အခြေအနေကို ကိုယ်သိလို့ ဖွင့် မဖတ်သွားတော့ဘူး။ မိုးချိူသင်းလာကတော့ ဖွင့်ရင် ဖွင့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုးသာကုန်ရုံသာ ရှိမယ်လို့စကားပါးခဲ့တယ်။ :P
MrDBA - 11/9/08, 1:47 PM
နိပ်ဟ။ တော်တော်ချက်ပြုတ် လုပ်ကိုင်စားကြတဲ့လူတွေဘဲဗျာ။ အခွင့်ကြုံရင်တော့ အိမ်လည်လာဖို့ ဖိတ်ပါဗျာနော် နော် :P
Andy Myint - 11/12/08, 10:14 PM
လုပ်စားကြည့် ညီမလင်းလက် ကောင်းတယ်။ စင်္ကာပူမှာလည်း မလေးဆိုင်တွေမှာ ရနိုင်တယ်။ သူတို့ လုပ်တာကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။
ကိုပီတိရေ ဒါမျိုးတွေ လုပ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ရှာယူတာ အကောင်းဆုံးလို့ အကြံပေးချင်တယ် ဟဲဟဲ
ဟုတ်တယ် မနုစံရေ အိမ်နီးချင်းရင် ကောင်းမယ်။ တကယ် ပြောတာ။ ပေါက်စီက အလွယ်ဆုံး အစ်အရ။ စမူဆာကတောင် ခက်သေးတယ်။
ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်း STRIKE .. ရှလွတ် ရှလွတ်တွေရော ဂလု ဂလုတွေရော မြည်သံစွဲတွေ များလှချည်လား :)
တကယ်လား မမြစ်ချေသူ... ကျွန်တော်က Recipe တွေ တင်သာတင်တာ လုပ်စားတဲ့ သူတွေ ရှိပါ့မလားလို့.. ၀မ်းသာပါတယ်။
စမူဆာ ပဲသုပ်တော့ လုပ်မစားဖူးဘူး The` ... ဆင်ခေါင်းပဲ (Chick Pea) ရယ်၊ မန်ကျည်းရည်၊ ပူတီနံ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ပဲရည် (ပဲမှုန့်ကို အရည်ကျို)၊ ကြက်သွန်နီ တွေတော့ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် ဒီအတိုင်း လုပ်ရင် နည်းနည်း ဖွယ်တယ် မကေ...
၀ယ်စားတဲ့ ပေါက်စီထက် ကိုယ်ဘာကိုယ်လုပ်တာ ပိုကောင်းတယ်နော် တီတီဂျစ်... ၀ယ်စားရင် အသားနည်းပြီး အဆီများလို့ တစ်ခါတစ်လေ ၀က်ဆီနံ့ နံတယ်. ယမ်းစိမ်းတွေ များချင်များသေးတယ်။ ကျွန်တော့် အသိတစ်ယောက်ဆိုရင် ၀ယ်စားတဲ့ ပေါက်စီဆိုရင် အပေါ်ယံ အခွံလေးတွေ ခွာစားတယ်. ဟိုလူက လက်နဲ့ ညှစ်ကြည့်လိုက် ဒီလူက ကိုင်ကြည့်လိုက်နဲ့မို့တဲ့....
စားချင်ရင် လုပ်စားပေါ့ ညီမတင်ဇာရယ်
အမလေးဗျာ .. အဲလိုတော့ မကျီစားပါနဲ့ STRIKE
နောက်ဆို စိတ်ခိုင်မှ ဖွင့်ဖတ် မခင်ဦးမေ
အမြဲတမ်း ဖိတ်ပြီး ကြိုဆိုပါတယ် MrDBA...
subuueain - 12/12/08, 2:35 PM
အမြဲ လာလည်ဖြစ် ပါတယ်။
ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
ကလေး လေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေ..
Zar Chy - 8/20/09, 11:06 AM
Anonymous - 9/1/10, 3:07 PM